OWESIFAZANE odabuka eMolweni kodwa osezinze eWyebank ngase-Pinetown, uNks Busisiwe Thusini (55) uthe ufisa umsamariya olungileyo ukuba umlekelele ngokuqala inkulisa njengoba ethi unesiphiwo sokunakekela izingane.
“Ukugada izingane ngikubona kuyisiphiwo esivela kuNkunkulunkulu. Ngiqale ukugada izingane ngo-1983, ngaleso sikhathi ngangisebenza enkulisa ebizwa ngokuthi yi-Jean Play Glen ese-Hillcrest bese ngo-2002 ngasebenza enkulisa ese-Kloof eyasungulwa ngu-Allan Artwell, “kusho uNks Thusini.
Uthe emva kokuba asebenze eKloof, uthole omunye umsebenzi wokugada izingane zomndeni wakwaRosman eGillitts. “Ngigade izingane ka-Rosman iminyaka emihlanu lapho ngangizi khonze ngendlela eyisimanga.
Inkinga yaba wukuthi unina wezingane wathola umsebenzi eGoli kwaphoqeleka ukuthi eyohlala khona nomndeni wakhe,” kusho yena.